ဆာမူရိုင်းဆံပင်ပုံစံ - သင်ဘာလိုအပ်တယ်၊ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Michael Serrano | | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဆံပင်ပုံစံ
ဒါဟာဆံပင်စုဆောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ကလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာကတည်းကကွဲပြားခြားနားထင်မြင်ချက်များကိုထုတ်ပေးပါတယ်အခြားဆံပင်ပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကာကွယ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်၎င်းတွင်နာမည်ကျော်သံအမတ်များရှိပြီး Jason Momoa သို့မဟုတ် Jake Gyllenhaal ကဲ့သို့သောသူတို့၏စတိုင်လ်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဆာမူရိုင်းဆံပင်မပေါက်မီသင်သိထားသင့်သမျှ
၎င်းသည်အလွန်ရှည်သောဆံပင်အတွက်ဆံပင်ပုံစံဖြစ်ပြီးအဓိကအားသာချက်မှာအလွန်အသုံးဝင်သည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုဤပုံစံဖြင့်ပေးခြင်းသည်အချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ဆံပင်ဖြူများနှင့်မတူဘဲသင်၏ဆံပင်ကိုသင်၏မျက်စိကိုဖုံးအုပ်ထားပါ။
ဤအငြင်းပွားဖွယ် Bun သည်ဆာမူရိုင်းမှအသုံးပြုသောဆံပင်ပုံစံဖြစ်သည် အနောက်တိုင်းသားများ၊ ရိုင်းစိုင်းသောရိုင်းစိုင်းသူများနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီဆံပင်ပုံစံကိုလူသိများတဲ့ sumo wrestlers ဆိုတဲ့အမည်ကိုမမေ့သင့်ပါ။
ဆာမူရိုင်းဆံပင်ပုံစံရခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၊ သင်သာရန်ရှိသည် သင်၏ဆံပင်ကိုနဖူးမှဆွဲတင်ပြီးပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုတစ်နေရာရာမှာဆုပ်ကိုင်သည် ဒီတစ်ခုနှင့်အတူအရောင်တူဆံပင်လည်စည်း၏အကူအညီဖြင့်။ သင့်ရဲ့ Bun (လူကို Bun လို့လည်းလူသိများ) ဟာသိပ်မြင့်လွန်းလွန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကျန်တဲ့ဆံပင်အတွက်သင့်မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လျော့။ ချန်ထားခြင်းကြောင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့်ပေါ့ပါးသောလေကိုရရှိစေပြီး၊ အကယ်၍ ၎င်းကိုရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်စေချင်ပါ၊ သို့သော်ပိုမိုရှင်းလင်းသောရလဒ်များကိုပိုမိုနှစ်သက်သည် (ပိုမိုကြည့်ကောင်းရန်အတွက်ကြည့်ရှုရန်) ဖြစ်လျှင်ကျန် strands များကိုမည်သို့စုဆောင်းရမည်ဆိုသည်မှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်သည်သင်၏ဆံပင်ညှပ်ကိုသင့်အား undercut ဖြစ်စေရန်တောင်းဆိုနိုင်သည် (ဆံပင်ရှည်နှင့်ဆံပင်ရှည်နှင့်အလွန်ရှည်သည်နှစ်ဖက်စလုံးနှင့် nape) ။
မုတ်ဆိတ်သည်ကောင်းမွန်သောဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ မုတ်ဆိတ်မွေးအမျိုးအစားများ။ အဲဒီမှာသင့်ရဲ့ဆံပင်အတွက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းဆံပင်ပုံစံသည်ရဲရင့်စွာရဲရင့်စွာလိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ဗားရှင်းကောင်းရဖို့ သင်၏မျက်နှာပုံသဏ္andာန်နှင့်ဆံပင်အမျိုးအစားတို့နှင့်အတူလိုက်ပါရန်လိုအပ်သည်။ အောက်ပါတို့သည်အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသင်စုသိမ်းသလား။
ဆံပင်ပြန်ကျောနှင့်အတူဆံပင်ပုံစံအားလုံးကဲ့သို့ samurai ဆံပင်ပုံစံသည်ဘဲဥပုံ (သို့) အဝိုင်းပုံရှိသောအမျိုးသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မျက်နှာပုံသဏ္ifန်ရှိပါကကြည့်ကောင်းမည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်ထက်ပိုမိုရှည်လျားစွာပေါ်ပေါက်စေလိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်စွဲမှတ်ထားသင့်သည်။
ကောင်းမွန်သောဆာမူရိုင်းဆံပင်ပုံစံကိုကစားရန်အရေးကြီးဆုံးမှာဆံပင်သည်ရှည်လျားကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ပခုံးကိုရောက်သင့်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်တိုတောင်းသောဆံပင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်လျှင်စိတ်ရှည်ပါ၊ ထို့အပြင်သင့်ဆံပင်သည်လိုအပ်သောအရှည်မရောက်မချင်းသေးငယ်သောအနံ့ဆိုးများကိုရှောင်ပါ။
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ အလယ်အလတ်အရှည်ဆံပင်ညှပ်။ သင်၏ဆံပင်ပုံစံကိုသင်၏ပခုံးပေါ်သို့စိုက်လိုက်သောအခါသင်ရွေးချယ်နိုင်သောနည်းလမ်းအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဟာသင်၏ဆံပင်ကြီးထွားမှုလိုင်းမည်မျှများပြားကြောင်းပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆံပင်ပြန် combed ရမည်ဖြစ်သည်ကတည်းက ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်ဖုံးကွယ်လိုပါကပိုကောင်းသောဆံပင်ပုံစံများရွေးချယ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တိုတောင်းသောဆံပင်ညှပ်ဆံပင်များသည်ကျူပင်သို့မဟုတ်ချောသောဆံပင်ရှိအမျိုးသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်ဆံပင်အမျိုးအစားကိုမဆိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံဖြစ်ပါကသင်လုပ်ချင်သောမည်သည့်ဆံပင်ပုံစံကိုမဆိုဆက်သွားပါ။
ဆာမူရိုင်းဆံပင်ပုံရရင်၊ ထုံးစံအတိုင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် nape ကိုချုံ့ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆာမူရိုင်းဆံပင်ပုံစံကိုတတ်နိုင်သမျှသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာရှာဖွေနေလျှင်ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုအထူးဂရုပြုရန်အထူးအရေးကြီးသည်။
သင်၏ဆံပင်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါခြောက်သွေ့သောစွန်း၊ ရှုပ်ထွေးမှုသို့မဟုတ်မရိုင်းသောဆံပင်များရှိပါကအဝတ်လျှော်နေစဉ်ပြုပြင်ရန်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ ၎င်းကိုပုံဖော်သောအခါအလင်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုသုံးနိုင်သည် ဆားငန်ပုံစံမှုန်ရေမွှား. ဤထုတ်ကုန်များနှင့် texture နှင့်ကိုင်နည်းနည်းပေးလေ့ရှိပါတယ်။.
Matte ယွန်းသို့မဟုတ်ဖယောင်းအချို့ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ထားခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ အမှု၌သင်က၎င်းကိုလိုချင်သောပုံသဏ္givingာန် ပေး၍ အဆုံးသတ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြင်ဆင်မှုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ထက်ကားထိုအညိုရောင်ဆံပင်များအားလုံးနေရာတွင်ထားပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာကိုဖန်တီးပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ဆံပင်ပုံစံ » ဆာမူရိုင်းဆံပင်ပုံစံ
အဆီ burners တွေကို